Mainjiniya eApple vanoenda kumba kune avo vakagumburwa ne iTunes erasure | IPhone nhau
Vhiki rapfuura, James Pinkstone akanyora pane yako blog izvo iTunes Match yakanga yabvisa 122GB kubva raibhurari yake yemumhanzi. NeChishanu chapfuura, Apple yakasimbisa kuvepo kwedambudziko, asi haina kukwanisa kuiburitsa munzvimbo dzayo. Zvakawanda zvekuti Pinkman anovimbisa izvozvo Apple yakatumira mainjiniya maviri kumba kwako kuongorora zvingave zvakaitika kuedza kubereka dambudziko iri. Aya mainjiniya aive angangove Mugovera wese kumba kwaPinkman uye kwaivewo nemavhidhiyo musangano pamwe nevamwe mainjiniya mubhokisi kuyedza kubereka kutadza.
Apple mainjiniya akabaya dhiraivhiti rekunze mukombuta yaPinkman uye vakamhanyisa yakasarudzika vhezheni yeTunes kuyedza kuburitsa kudzima kwakawanda kwenziyo kubva iTunes. Vakapedza yakawanda yeMugovera vachiyedza nekutaurirana naCupertino panguva yekuita. NeSvondo, mumwe weava mainjiniya akadzokera kumba kwaPinkstone kunotora data rake iTunes uye Apple Music mashandisiro neMugovera manheru, vachitarisira kuwana kuwirirana pakati pemaitiro ake nekudzima kwenziyo. Asi havana chavakawana.
Kubvisa nziyo kubva kuTunes kunoramba kuri chakavanzika
Pinkstone anoti mumaawa ayo mainjiniya eApple vaive kumba kwake hapana chakawanikwa uye kuti iri zvinoshamisa uye zvakaoma kudzokorora glitch nekuti hapana pateni yakateedzerwa. Mamwe mafaira akabviswa, mamwe anga asiri, mamwe aive mune imwe fomati, mamwe aive mune imwe.
Panguva ino, nei idzi nziyo dzakabviswa dzichiri chakavanzika. Nhau dzakanaka ndedzekuti zvakasimbiswa izvozvo iTunes 12.4 inosanganisira matanho ekuchengetedza iyo Apple yakavimbisa pakupera kwesvondo rapfuura, kunyangwe izvi zviyero zvisina kuiswa mune runyorwa rwezvinhu zvitsva. Kune rimwe divi, mune angangoita ese magadziriso esoftware tinogona kuverenga kuti zvigadziriso zvidiki zvaverengerwa uye matanho ekuchengetedza ari pakati pavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Mainjiniya maviri eApple vanoenda kumba kweavo vakawirwa nekubviswa kweraibhurari yeTunes